Miroborobo ny fizahantany romanianina any Israel
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miroborobo ny fizahantany romanianina any Israel
Romania no lasa firenena lehibe any Eoropa Atsinanana amin'ny maha loharanom-pizahan-tany an'i Israel azy, mihoatra an'i Polonina aza, firenena iray izay nitana ny laharana ambony indrindra tao anatin'izay taona lasa izay.
Mitombo hatrany ny fahalianan'ny Romanianina amin'i Israel, satria ny isan'ny mpizahatany amin'ity taona ity dia efa nihoatra ny tanjona 100,000 XNUMX voatondro ho tanjona amin'ny faran'ity taona ity.
Raha ny angom-baovao farany avy amin'ny Ministeran'ny Fizahan-tany any Israel, ny isan'ny mpizahatany romanianina mitsidika ny firenena tao anatin'ny 11 volana voalohany tamin'ny taona dia 100,900 35, 2016% avo kokoa noho ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa ary mihoatra ny avo roa heny raha oharina amin'ny iray ihany vanim-potoana 20,000. Tamin'ny volana Oktobra fotsiny dia efa ho 14,000 XNUMX ny Romanianina nitsidika an'i Israel, ary tamin'ny Novambra - XNUMX.
Isan-kerinandro, sidina 40 mahery no miala ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Henri Coandă any Bucharest mankany amin'ny seranam-piaramanidina Ben Gurion any Tel Aviv. Manodidina ny 2.5 ora ny sidina ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo sidina fohy indrindra mankany Moyen Orient.
Sidina 60 mahery isan-kerinandro izao no mampifandray an'i Tel Aviv sy Eilat amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe any Romania - Bucharest, Timisoara, Cluj, Iasi ary Sibiu… 2018 raha ampitahaina tamin'ny taona 2016 dia nahitana fiakarana 152 isan-jaton'ny mpizahatany romanianina, ary mijanona ho miabo hatrany ny fomba fijery.
Fahefana fizahan-tany any Hawaii: Mandany 'saika fisaka' ny mpitsidika amin'ny Novambra
Manafaingana ny fanavaozana ny fiaramanidina ny kaompaniam-pitondrana GOL any Brezila